Shiinaha & Maraykanku Dan Mise Dagaal.?!
Thursday November 25, 2021 - 21:27:11 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Todobaad ka hor waxaa dhacay shir madaxeed dhex maray madaxweynayaasha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping, Shirkaas oo ujeedkiisa ugu waynina waxa uu ahaa hagaajinta Xidhiidhkooda guud.
Iyo in ay si wada jir ah u wajahaan caqabadaha Adduunku wajahaayo Maanta, Waxana ka horeyey Shirka Saddex wada hadal oo hore kuwaas oo dhex maray labadan masuul ilaa ay ugu danbayntii Isla soo gaadheen Shirkan.
Si Guud marka loo eego dhammaan wada hadalladi dhex maray Labadan Masuul ayaa u muuqda kuwo rajo wanaagsan leh, Iyaga oo sheegay in mas’uuliyadda saarani ay tahay mid uu baahan dammaanad qaad dhaba, Si aanu tartanka dhexdoodu isugu bedelin Colaad Dagaal, Isla markaana taas badelkeeda ay u baahi qabaan in ay kordhiyaan xidhiidhkooda Iskaashi.
Ka dibna Xoghayaha Arrimaha Dibedda Maraykanka
Mr Blinken aya yidhi "xidhiidhka aanu Shiinaha la leenahay waxa uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan uguna adag Aduunka,
Xidhiidhkaasina waxa uu leeyahay dhinacyo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin mid iskaashi, tartan, iska hor imaad Isla markaana aanu awoodno in aanu hal mar ka wada shaqayno dhammaan Arimahaas."
Isaga oo Blinken marka meesha ka saaray in aanay marna iska hor imaad keliya ka wada shaqayn doonin labada Dal.
Fasiraaddan lafteeda ayaa Astaan ​​u ah Xidhiidhka Mareykanku la leeyahay Shiinaha, Maadaama uu Biden marar badan oo hore uu ku adkeystay adkaynta Xidhiidhkaas
Uuna yahay Nin u janjeedha dhanka degganaanshaha iyo Nabada Adduunka, Iskuna dayaayo Biden hada in uu dhiso buundo is fahan oo isku xidha iyaga iyo Shiinah, Balse aanay weli xariiqdiisu gaadhin meel la taaban karo oo muuqata illaa hadda dhanka Shiinaha.
Waxaa jira Laba arrimood oo saameyn ku leh Xidhiidhkooda midi waa mid la xidhiidha dhanka istiraatijiyadda caalamiga ah Ee u dhaxaysa Labada Dal, Tan labaadna waxay la xidhiidha danaha dhaqaale ee labada dhinac kala leeyihiin,
Balse hadana labaduba way iska soo horjeedaan waayo waxa ugu cabsida badan ee uu Maraykanku dareemaya waa sare u kaca Shiinahu ku socdo Siyaasad ahaan, Ciidan ahaan iyo Dhaqaale ahaanba iyo weliba Deknoolajiyada oo ay iyada maanta ka dhalan karto isbedelka awooda si fudud, Hadii Shiinuhu la wareego ugu yaraan Gacan ku haynta Teknoolajiyada Adduunka taasi waxay meesha ka saari karta saamaynta uu Maraykanku ku leeyahay Adduunka, Isaga oo Maraykanku isu arka hada in uu yahay hoggaamiyaha Caalamka oo Idil, Waxay taasina gabaabsi gelin doonta dhanka kale Barwaaqada Maraykanka oo aan sidii hore ammaan u noqon doonin marka iyo in aanu Dollarku noqon doonin lacagta ugu badan Suuqyada Caalamka, Sidaa darteed Maraykanku wuxuu lumin kara soo jiidashada maalgashiga suuqyada Adduunka, Taas oo ka mid ah qodobbada barwaaqada Maraykanka laf dhabarta u ah.
Markaan soo koobo Labadan Dal aragtidoodu weli Waxay ku xidhan tahay xisaabinta danaha dhaqaale ee labadooda dhinac ka dhexeeya, Taas oo macnaheedu yahay in isku tiirsanaantooda oo sii korodha ay dani ugu jirto labadoodaba iyo dunida kaleba.
Tusaale ahaan Sanadkii 2018, ayaa lagu dhawaaqay in Shiinuhu Dalka Koowaad ee uu wax u dhoofiya yahay Dalka Maraykanka, Halka suuqa Saddexaad Ee uu Maraykanku wax u dhoofiyaana uu yahay kan Shiinaha.
Marka la eego Shiinaha Maraykanku waxa uu u yahay Suuqa ugu weyn ee uu alaabtiisa u dhoofiyo, Halka Shiinuhuna u yahay Suuqa Saddexaad Ee uu Maraykanku wax u dhoofiyo, marka inta lagu daro isdhexgalka baaxada wayn ee uu dhexeeya Warshadahooda wax soo saar, Kuwaas oo kor u kac wayn sameyey sagaashamaadkii, Ka dib natiijadii ka dhalatay Horumarka wax soo saarka warshadaha Shiinaha, Ilaa xad ay gadheen marka in qaybo ka mida alaabta Shiinaha loo isticmaalo in lagu sameeyo alaabta Maraykanka.
Marka la eego dooda ah in uu Shiinuhu samaynaayo sare u kac wayn oo saamayntiisa leh Aduunka, Balse hadana Cullimada Siyaasadda ku xeesha dheer ayaa meesha ka saaraya in aanay taasi Shiinaha ka dhigi karin mid Adduunka Hogaamiya Waqtigan, Waxana ay leeyihiin hoggaaminta Nidaamka Caalamiga ahi maaha wax sahlan oo xidhiidh toosa la leh kor u kaca Dhaqaale oo keliya, Waxana ay u arkaan in Shiinaha lagu magacaabi karo quwad sare uu soo kacaysa oo aanay ahayn quwad buuxda, Taas oo awood buuxda u leh ka talinta caalamka Maanta, Iyaga oo ku doodaya xattaa hadii ay taasi si lama filaanka ah u dhacdo ay taasi guud ahaanba quwadaha Adduunka ku keeni karto khalkhal ku yimaada iyaga iyo Nidaamka Caalamiga ah laftiisa kaas oo ugu danbayntii saamayn taban ku keeni doona Adduunka oo dhan.
Aragtidani waxay fursad u siisay Maraykanka iyo Shiinaha in ay si isku mida ah u wada arkaan ugana wada xajoodan, Waxayna gadheen gunaanadkii in labada waddanba ay ogyihiin cawaaqibka ka dhalan kara taas oo ay ka fogadaan Tartan Dagaal horseeda.
Marka la eego hamiga Shiinaha ee ah inuu hoggaamiyo nidaamka Adduunka maalin uun, Isaga oo Shiinuhu taas aad u danaynaayo in uu xaqiijiyo hadana si uu taas u gaadho waa in uu ka shaqeeyo Nidaamka Hay'adaha Caalamiga ah oo ay dhammaantood ka qayb qataan doonistiisa gaar ahaan Qaramada Midoobay. Inkasta oo uu Shiinuhu mar kasta diidan yahay in reer galbeedku ka taliyaan Hay'adaha Caalamiga ah hadana weli Xukunkooda kumu yeelan wax saamayn ah, Taas oo u abuuri karta meel uu ka soo galo Shiinuhu mar uun.
Falanqeeyayaal Siyaasaddaha Adduunka gaar ahaan kuwa Reer galbeedka iyo Maraykanka ayaa muujinaya walaaca ay ka qabaan khatarta wayn Ee dhalan karta sii xoojinta tartanka istiraatijiyadeed ee u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha,
Waxanay sheegayaan hadii uu sidaa ku sii socdo tartankoodu in ugu danbayntii laga yaabo in mar uu dhexdooda ka bilowdo isku dhac Dagaal oo toos ahi , Kaas oo ka dhigaaya Dagaalkooda mid ka baxsan Dirir laba geesood ah, Ayna Colaada ku balaadhiyaan Adduunka oo dhan taasna uu ka dhasho Khasaare Ciidan iyo mid Dhaqaale kaas oo Dal walba halkiisa ku taabta marka.
Ugu danbayntii Dadka Siyaasaddaha Indho indheeya Waxay aaminsan yihiin in kulanka ​​madaxweynayaasha Maraykanka iyo Shiinaha dhex maray ay iskula garwaaqsadeen fahamkooda ku saabsan sababaha keeni kara isku dhacooda Dagaal, Ayna haboon tahay in ay tartankooda dhinacyo kale u weeciyaan kaas iyaga iyo Adduunkaba faa'iido u leh.